8 × 30 Podcast: Na ofchọ Aka ID | Esi m mac
8 × 30 Podcast: Na Nchọnụ Touch ID
Mgbe otu izu nke #PodcastApple na-eri oriri, anyị na-agbasi mbọ ike karịa mgbe ọ bụla. Tuesday gara aga anyị malitere na ihe omume 30 nke oge asatọ a na-ekwu okwu ozugbo banyere Touch ID na asịrị nke iPhone 8, "X", Special Edition ma ọ bụ ihe ọ bụla Apple kpọrọ ya. Isi isiokwu bụ n'oge na-adịbeghị anya asịrị banyere ọnọdụ nke ihe mkpịsị aka ihe mmetụta na ụdị iPhone ọzọNke a dị ka etinyere n'azụ ngwaọrụ ahụ ma anyị enweghị mmasị na nke a nke ukwuu, mana ha abụghị ihe ọ bụla karịa asịrị na nchapu n'ihi ya ọ dịghị mkpa inwe ụjọ ma.
Na mgbakwunye na data a dị mkpa maka ndị ọrụ iPhone na anyị nwere ike ịhụ ọnọdụ nke ihe mgbaàmà mkpịsị aka gbanwere, n'abalị ụnyaahụ anyị kwuru maka nkọwa nke ihuenyo na ọdịdị nke iPhone ọhụrụ na mgbakwunye na kwuo okwu banyere ụfọdụ isi ihe ndị ọzọ n'izu ahụ mgbe ọtụtụ ụbọchị nke oriri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » 8 × 30 Podcast: Na Nchọnụ Touch ID
Apple Music nwetere ikike izizi nke akwụkwọ Clive Davis
More Apple ememe na Earth Day na Apple Watch dị ka protagonist